आईओएस .7.1.१ कुञ्जीपाटीले केमा केही कॉस्मेटिक परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ आईफोन समाचार
सोमबार दिउँसो हामीले देख्यौं कसरी संस्करण को एक iOS7धेरै प्रत्याशित: .7.1.१। यस अपडेटले सम्पूर्ण अपरेटि system प्रणालीको धेरै पक्षहरूमा असंख्य परिवर्तनहरू समावेश गर्दछ, दुवै सौन्दर्य र कार्यात्मक। एक मध्ये एक कि अहिले सम्म सबैभन्दा विवाद उत्पन्न गर्दैछ किबोर्ड खण्डमा अवस्थित छ।
यो परिवर्तन उल्लेख गरिएको छ किनकि यो किबोर्ड मोड सक्रिय पारिएको कुन राज्यमा विशेष गरी स्पष्ट छैन (लोअर केस, अपर केस र किबोर्ड लक गरियो), कम्तिमा सम्म तपाइँले यो कसरी काम गर्दछ थाहा छ। यदि तपाईंसँग आईओएस .7.1.१ छ र तपाईंलाई यस प्रकारको समस्या भइरहेको छ भने, यो भर्खरै समावेश गरिएको सानो पक्षमा आफैंलाई कसरी मार्गनिर्देशन गर्ने भन्ने बारे द्रुत समाधान यहाँ छ।
यस तरिकाले, हामी माथि उल्लेख गरिएका तीन राज्यहरू प्रत्येकलाई संकेत गर्न आईओएस .7.1.१ कीबोर्डमा प्रतिनिधित्व भएका तीन पक्षहरू देख्न सक्छौं।
यदि हामीले यो देख्यौं कि कुञ्जीको तल छ खैरो र कुञ्जी सेतोमा छ, हामीले सक्रिय गरेका मोड लोअरकेसमा सबै लेख्नु हो।
यसको विपरित, यदि हल्का रंग (सेतो) को एक पृष्ठभूमि हो र कुञ्जीलेaलाई ग्रहण गर्दछ कालो रंगयसले संकेत गर्दछ कि हामीले एकल क्यापिटल अक्षर लेख्ने विकल्प सक्रिय गरेका छौं।
अन्तमा, हामी यहाँ सबैभन्दा ठूलो दृश्य परिवर्तन देख्छौं, र त्यो यो हो कि तेर्सो रेखा मुख्य एरो अन्तर्गत क्याप्स लक अन छ भनेर संकेत गर्न।
यो, किबोर्डमा लागू गरिएको अन्य परिवर्तनहरूका साथ, यसलाई केहि अधिक उपयोगी र अझ राम्रोको लागि बनाउँदछ प्रयोगकर्ता अनुभव। यद्यपि यो सत्य हो कि यी अचानक इशाराहरूले हामीलाई फरक बनाउन र केही फरक पार्ने बनाउन सुरुमा फरक पार्छ, दैनिक प्रयोगको माध्यमबाट यसलाई प्रयोग गर्न लामो समय लिने छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» यी आईओएस .7.1.१ किबोर्डमा बिभिन्न विकल्पहरू छन्
र तपाईं रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न? अँध्यारोलाई? मैले यो पढेको छु तर मैले कतै विकल्प देख्दिन।
यो सबै क्याप्स कार्य कसरी सक्रिय भयो भन्ने महसुस गर्न मेरो लागि गाह्रो थियो, यसमा कोही पनि टिप्पणी गर्दैनन्। यो प simple्क्तिमा दुई पटक तीर ट्याप गर्नु जत्तिकै सरल छ। मलाई लाग्छ कि हामी सबैले आफ्नो औंलाहरु थिच्यौं वा अनौंठो कार्यहरू गर्यौं। म जस्तो अनुहारको लागि हामीलाई चाहिन्छ, किनकि तिनीहरूले फरक परिवर्तनहरूको बारेमा टिप्पणी गरे, जुन उनीहरू हामीलाई कसरी गर्ने भन्ने बारे वर्णन गर्छन्।
Matute लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो सुविधा आईओएस १ को वरिपरि भएको छ।
र म अचम्म मा ... यति गाह्रो र जटिल आईओएसमा थप्नको लागि फंक्शन हो जसले शोकेस भनिने नि: शुल्क साइडिया चिम्ट बनाउँछ ??? यो प्रकार्य यति सरल र दृश्य छ कि मँ बुझ्दिन कि एप्पलले यो परिवर्तनको फाइदा लिई यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरेको छैन जुन मेरो विचारमा बेवास्ता गरिएको छ, किनकि यसले पुरानो प्रयोगकर्ताहरूलाई गर्ने सबैलाई अलमलमा पार्नु हो र नयाँहरूलाई पूर्णरूपमा उस्तै दिनु हो। । शोकेसले के गर्छ कुञ्जीपाटीमा सबै अक्षरहरू अपरकेस वा लोअरकेसमा परिवर्तन हुन्छ जुन हामीमा छौं मोडमा निर्भर गर्दै। सजिलो, दृश्य, र सबैको लागि उत्तम।
Aarancon संग पूर्ण सहमत प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई सुधार गर्नु भनेको ती अक्षरहरू वास्तवमै लेखिएको जस्तो देखिन्छ। मेरो शोकेसका लागि यो सिडियाको अत्यावश्यक चीज मध्ये एक हो, र यो एक कारण यो हो किन मैले आईओएस from बाट आईओएस to मा नजाँउन्जेल जेल ब्रेक नभएसम्म। एप्पल के लगाउन खोज्दैछ?
आईओएस .7.1.१ मा गाढा किबोर्ड कसरी प्राप्त गर्ने कोहीलाई थाहा छ ??
Vaderkf लाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरूले के गर्नु पर्छ भनेको रंगीन हुनबाट रोक्नुहोस् र प्रकार्यहरू सुधार गर्नुहोस्। उदाहरण: साइडियाबाट स्वाइपसेलेक्शन।
दृढ रूपमा सहमत शोकेस केवल धेरै सुविधाहरूमध्ये एउटा हो जुन हामी जेलब्रेक गर्छौं हाम्रो उपकरणहरूमा पुरानो एप्पलको सार प्राप्त गर्न।
Betoman लाई जवाफ दिनुहोस्
जेलब्रेक? वा यो एक जेल ब्रेक वा कसरी छ? तपाईले बट्टोभमान लेख्न सिक्नुपर्दछ। 😉
मैले आईओएस .7.1.१ मा गाढा किबोर्डको बारेमा धेरै ठाउँमा पढेको छु र म अझै फेला पार्न सक्दिनँ !!! कसैलाई थाहा छ?
केको यदि तपाईं गाढा कुञ्जीपाटी हेर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले केवल मुख्य स्क्रिन छुनु पर्दछ, र तपाईंको औँला तल स्लाइड गर्नुहोस्! 😄
जुआन्का, हो, तर तिनीहरूले टिप्पणी गरे कि तपाईंले यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ ...
आईफोन ss प्रयोगकर्ताहरूले आईओएस .5.१ अपडेट गर्दा टच आईडी मुद्दाहरूको रिपोर्ट गरिरहेका हुन्छन्